Qisada yaabka leh ee Maxamed Cali: Ardayga Kaalinta 2aad ka galay Imtixaanka Dugsiyada Sare ee Dalka - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Arday Agoonnimo lagu soo koriyey oo hooyadiis ay tahay qof danyar ah oo Shaah iibisa ayaa galay kaalinta labaad ee imtixaanka Dugsiyada sare ee dowladda sanad dugsiyeedka 2020/2021.
Maxamed Cali C/raxmaan Maxamed ayaa celcelis ahaan helay dhibco gaaraya 95%, wuxuuna galay kaalinta labaad imtixaanka dowladda, isagoo kaalinta koowaad ku sigay wax ka yar 0.5, taasoo muujisay dadaalkiisa iyo heerkiisa waxbarashada.
Maamulka Dugsiga Al-salaam ee degmada Dharkeynley oo uu dhigan jiray ayaa sheegay in Ardayga Maxamed Cali uu ahaa wiil dadaal badan oo mar waliba uu kaalimaha hore u geli jiray Dugsiga. Hadda waa ardayga kaalinta koowaad ee Gobolka Banaadir.
Sidoo kale Maxamed Cali waa xaafid Qur’aanka kariimka ah, wuxuuna kaalinta koowaad ka galay tartamo qur’aan akhris ah oo uu ka qeyb galay magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay inuu ku mashquulsanaa Waxbarasho, isla markaana aanu isticmaali jiray baraha bulshada ee ardayga ku mashquuleen, kaliyana uu khadka geli jiray marka uu wax kala soo degayo.
Hooyada dhashay Ardaygan Bishaaro Daahir ayaa sheegtay inay xaalad aad u adag kusoo korisay isagoo agoon ah, haddana aysan awoodin inay jaamacad ka bixiso, waxayna baaq u diray madaxda dowladda iyo Maamulka Gobolka Banaadir inay ka saacidaan Ardaygan sidii uu Jaamacad u heli lahaa.
Previous articleGuddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo oo ku baaqay in Maxkamad lasoo taago C/llaahi Kulane
Next articleCumar Filish: “Markii la i magacaabay waxaa la qabtay Dad doonayey inay Aniga isku key qarxiyaan, welina..”